Nkwukọrịta oge: Gini bụ WebRTC? | Martech Zone
Nkwukọrịta oge na-agbanwe etu ụlọ ọrụ si eji ntanetị weebụ ha na-emekọrịta mmekọrịta na atụmanya na ndị ahịa.
Gịnị bụ WebRTC?
Nkwukọrịta oge na Web (WebRTC) bụ mkpokọta nkwukọrịta nkwukọrịta yana API nke izizi nke Google mepụtara nke na-enyere ụda olu na nkwukọrịta vidiyo oge njikọ ndị ọgbọ. WebRTC na-enye ndị nchọgharị weebụ ohere ịrịọ ezigbo oge site na ihe nchọgharị nke ndị ọrụ ndị ọzọ, na-enyere ndị ọgbọ aka na ndị ọgbọ na-ekwurịta okwu gụnyere olu, vidiyo, nkata, nnyefe faịlụ, na ịkekọrịta ihuenyo.
Twilio - Gini bu WebRTC?
WebRTC dị ebe niile.
Ahịa WebRTC zuru ụwa ọnụ bụ $ 1.669 ijeri USD na 2018 ma na-atụ anya iru $ 21.023 ijeri USD n'ụwa nile site na 2025.
Nnyocha Ahịa Zion
Afọ ole na ole gara aga, WebRTC malitere dị ka onye na-eweta ọrụ VoIP na-ezubere iche maka ihe nchọgharị weebụ. Taa, enweghị ihe nchọgharị na-eme ka ụda / vidiyo na-enweghị mmejuputa WebRTC. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa kwenyere na WebRTC dara ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na atụmanya ha, ikekwe ọ bụ ndị na-ere ahịa ahụ ejighị WebRTC mee ihe iji mee ka ahụmịhe onye ọrụ ka elu.
WebRTC bụ maka ịkwalite mkparịta ụka ezigbo oge site na ihe nchọgharị weebụ. Na nso nso a, Google kpughere Chrome nwere ihe karịrị ijeri 1.5 nke ihe ọdịyo / vidiyo kwa izu na nkeji. Nke ahụ bụ Olee ihe enyemaka Ijeri nde 214 kwa ụbọchị. Ma nke ahụ bụ naanị na Chrome! Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere ike achọpụtara iji WebRTC.
Kedu ihe nkwukọrịta oge dị na WebRTC?
Ikesa ihuenyo - Nweta ọtụtụ ihe na mmekota na ndị ọrụ ndị ọzọ ozugbo. WebRTC 'gam akporo / iOS video nkata ngwa na-enyere ndị ekere òkè nke ihuenyo remotely na ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ onye ọrụ na-enwe ohere kwesịrị ekwesị. Na WebRTC na-egosi, Modern imekọ ihe ọnụ na-guzobere abụọ nke na-eduga nkwurịta okwu n'elu ikpo okwu na enye bụ Skype& Ntụgharị. Ihe ngosi ihuenyo na-eme ka mmekorita azụmahịa niile dị na ọkwa ọzọ ebe nzukọ nzukọ na-arụ ọrụ bụ ọrụ ya bụ isi. Site na mkparịta ụka gaa na ngosi, webinars gaa nzukọ, ikesa ihuenyo abụrụla isi.
Nzukọ ndi mmadu eji eme ihe otutu - Nnukwu ogbako vidiyo nke onye na-eme ihe ngosi na-achọ ọtụtụ ihe iji jide ọtụtụ ndị ọrụ n'otu oge, nke a bụ ebe nkata weebụ WebRTC na-abata. WebRTC na-egosi sava na-enye ohere ịme ezigbo oge na-eji ire ụtọ ọtụtụ ndị otu vidiyo na oku olu na ụwa. WebRTC vidiyo na oku olu na-achọ obere ego nke usoro mgbasa ozi iji jikọọ ndị niile sonyere na oku vidiyo ọtụtụ. WebRTC ngwa oku vidiyo na-atụle njikọta ọtụtụ mmadụ site na MCUs (Multipoint control units) na SFUs (Nhọrọ ntụgharị mbuga).
Imekota na Ease - Thosebọchị ndị ahụ mgbe ị na-abanye ịbanye na akaụntụ, budata ikpo okwu ma wụnye ọtụtụ nyiwe naanị iji jikọọ onye ọrụ ọzọ iji kparịta ụka. Site na nkesa olu na nkata vidio WebRTC, enweghị usoro ọdịnala. Mkparịta ụka ederede WebRTC na-eme ka ọ dịkwuo mfe ma dị mfe ịnweta mmekorita n'enweghị nsogbu. A na-eme ka mmekorita oge dị mfe na nyiwe nke ejiri ihe nchọgharị na-akwado WebRTC.
Njikwa Nkọwa - Nnyefe nke nnukwu data abụwo ihe siri ike ma na-akpata nsogbu ebe ndị a na-eduga ndị ọrụ iji gbanwee gaa na ngwa ndị ọzọ dịka Email ma ọ bụ draịva. Usoro nke ịnyefe data adịghị mfe, ọ na-eri oge dị ukwuu, mbọ na data. Site na ihe nkesa na-egosi WebRTC, ọ na-ebelata usoro ahụ site na ịhapụ ịhapụ ya ozugbo site na weebụsaịtị agbakwunyere vidiyo vidiyo API. Ọzọkwa, WebRTC na-ahapụ ịnyefe faịlụ ndị ahụ na njedebe dị oke ala na ihe ọ bụla bandwit. N'elu ya, WebRTC na-ezipu data n'okpuru otu ụlọ dị nchebe.
Multi-ala Video & Voice Nkwurịta Okwu - WebRTC na-egosi WebSockets na-enye usoro siri ike RTP (SRTP) nke na-ezipụ mkparịta ụka olu otu WebRTC dum na-ebufe na gam akporo, iOS & ngwa weebụ. Ọzọkwa, ọ na-site na nkwenye maka nkwurịta okwu n'elu WiFi iji chebe oku site na-achọghị ohere na ndekọ nke oku.
Real-oge ọrụ maka Live Communication - WebRTC nwere ikike iwekota na ngwa ọ bụla iji nweta mkparịta ụka ndụ na mpaghara niile. WebRTC akụrụngwa & nkata vidiyo SDK na -emepụta ụzọ kwụ ọtọ iji mee mkparịta ụka ndụ n'agbanyeghị ụlọ ọrụ, site na mkpọsa, ecommerce, ahụike, nkwado ndị ahịa, ọ na-enye ọrụ nkwukọrịta oge.
Low Latency ịkparịta ụka n'ingntanet - API Kpọọ vidiyo na WebRTC mwekota na-enyere aka ịkekọrịta data ozugbo na ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa dị iche iche na-enweghị ịbanye na usoro nke sava. Ntinye ntanetị na-akọwapụta usoro data na uru nnyefe na ntanetị dị ala. WebRTC mere ka ngwa nkata nweta nnukwu ozi na faịlụ na ngwa ndị ọzọ n'agbanyeghị agbanyeghị bandwidth weebụsaịtị nwere.
A WebRTC Video oku iji Node.js
Iwekota WebRTC Iji MirrorFly
Chọrọ ịmalite taa? Lelee oge RealFly Nkata API. Site na Chat API ha, ị nwere ike iwulite ngwa ngwa izipu ozi dị iche iche site na iji ọtụtụ atụmatụ na arụmọrụ. Ha na-enye ezigbo oge API maka ngwa weebụ yana SDK maka ngwa mkpanaaka gam akporo na iOS.
Tags: google +ozugbortcnyochasdkvideo ogbakowebrtc
Sienna bụ onye na-agụ akwụkwọ, onye edemede nwere obi ụtọ, onye nkiri nkiri, onye na-agagharị agagharị na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere m mmasị ide banyere teknụzụ na otu o si daba na ndụ gị kwa ụbọchị.